BhuMSpacE: झरी परेको बेला
आज झरी परिरहेछ बाहिर निरन्तर रुपमा। म भने यो डम्म परेको कोठामा बसेर केहि लेख्ने प्रयास गर्दैछु। झरी परेको मलाई रमाईलो लाग्छ। झरी परेको हेर्न, सुन्न अनि अनुभव गर्न। अहिले भने म केवल सुनिरहेछु बाहिरि वातावरणलाई। यो काठमाडौको कृत्रिम शहरमा पनि झरी परेको बेला मलाई प्रकृतिको नजिक भए जस्तो अनुभव हुन्छ। धेरैपल्ट रुझको छु म पानीमा, कहिले बाध्यताले अनि कहिले रहरले। कहिले सोच्छु, झरी परेको बेला सबैजना बाहिर निस्किएर नाच्ने अनि रमाईलो गर्ने चलन भए कति रमाईलो हुन्थ्यो होला।
झरी परेको शायद धेरैलाई रमाईलो लाग्छ। त्यहि भएर होला धेरै कविता, गीत अनि गजल कोरिएका छन्, यसको बारेमा। झरी परेको बेलादेखि लेख्न सुरु गरेको त घाम पो लागिसकेछ। वतावरण पनि अब त न्यानो भइसक्यो।
फेरी झरी परेदेखि म खुशी हुने थिएँ।
Aakar May 27, 2010 at 6:24 AM
"यो काठमाडौको कृत्रिम शहरमा पनि झरी परेको बेला मलाई प्रकृतिको नजिक भए जस्तो अनुभव हुन्छ।"
माथि को लाइन चाँहि साह्रै दह्रो लाग्यो । झरी परेको बेला रमाइलो नै हुन्छ । मलाई पनि त्यो पानी परेको आवाज चाँहि मन पर्छ, अनि त्यतिखेर मलाई चिया वा कफी चाहिन्छ चाहिन्छ, वा सुत्नुपर्छ या त पानी मै गएर भिज्नु पर्यो ।
वर्षा को मौसम आउँदैछ, अब केही हप्ता कुरौँ न त, झरी को लागि हुँदैन ! हा हा हा
यस किसिम को ब्लग पढ्दा नि साह्रै रमाइलो हुन्छ, कारण यस्तो फरक कुरा, प्राय: थोरै ले मात्र ब्लग मा लेख्छन !
richa May 27, 2010 at 10:12 AM
धन्यवाद रमाईलो मानेर मेरो लेखाई पढिदिनुभएकोमा। अब त मलाई असार १५ मा धान रोप्दै हिलो खेल्न मन लागेको छ :P
Aakar June 1, 2010 at 7:53 AM
पिर गर्नु पर्दैन, असार १५ चाँडै आउँदैछ ! हा हा :P
Manyu June 20, 2010 at 2:06 PM
नाई नाई काठमाडौँ कृतिम छैन। झरी पर्न सुरु भए देखि अन्त्य सम्म अशनलाई हेर्न खोज्नु, तपाईँ फ्रेन्च रोमान्टिक हुनु हुनेछ।
bahakiyera yo jhari pare jastai maan bahakiteko bela j pani huna sakcha sabadhai hai
Aaaj pheri aanayeshai jhari paryo.....timilai samjhadai basnu ko majja nai beglai cha
Adams Kevin March 22, 2015 at 8:02 AM